का लागि अभिलेख Law & More
लेखक: Law & More
मर्मतको हकदार पूर्व पार्टनर काम गर्न चाहँदैन
नेदरल्याण्ड्समा, रखरखाव पूर्व पार्टनर र सम्बन्धविच्छेद पछि कुनै पनि बच्चाहरूको बाँच्न खर्चमा आर्थिक योगदान हो। यो एक रकम हो जुन तपाइँले प्राप्त गर्नुहुन्छ वा मासिक आधारमा तिर्नु पर्छ। यदि तपाईं आफैंलाई समर्थन गर्न पर्याप्त आय छैन भने, तपाईं हकदार हुनुहुन्छ […]
भाँडादारको रूपमा तपाईका अधिकारहरू के हुन्?
प्रत्येक किराएदारसँग दुई महत्वपूर्ण अधिकार हुन्छन्: बाँच्नको मजा लिने अधिकार र किराया संरक्षणको अधिकार। जहाँ हामीले घर मालिकको दायित्वको सम्बन्धमा भाँडादारको पहिलो अधिकारको बारेमा छलफल गर्‍यौं, किरायदारको दोस्रो अधिकारको बारेमा छुट्टै ब्लगमा […]
जब तपाईं नेदरल्याण्ड्समा आवास भाँडा गर्नुहुन्छ, तपाईं स्वचालित रूपमा भाडा सुरक्षाको लागि हकदार हुनुहुन्छ। तपाईंको सह-भाडादारहरू र सब्टेन्टहरूमा पनि यही लागू हुन्छ। सिद्धान्तमा, भाडा संरक्षणमा दुई पक्ष समावेश हुन्छन्: भाडा मूल्य संरक्षण र भाँडा सुरक्षा भाँडा सुरक्षा सम्झौताको समाप्ति बिरुद्द कि घरमालिकले सजिलै गर्न सक्दैन भन्ने अर्थमा […]
सम्बन्धविच्छेद गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न गाह्रो छ। एकचोटि तपाईंले निर्णय गर्नुभयो कि यो एक मात्र समाधान हो, प्रक्रिया वास्तवमै सुरु हुन्छ। धेरै चीजहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ र यो भावनात्मक रूपमा कठिन अवधि पनि हुनेछ। तपाईंको बाटोमा तपाईंलाई मद्दत गर्न, हामी दिन्छौं […]
नेदरल्याण्ड्स मा कार्य अनुमति को लागी आवेदन। यो तपाइँलाई बेलायतको नागरिकको रूपमा जान्नु आवश्यक छ।
December१ डिसेम्बर २०२० सम्म, यूरोपियन युनियनका सबै नियमहरू यूनाइटेड किंगडमका लागि लागू थिए र बेलायतको नागरिकता भएका नागरिकहरूले डच कम्पनीहरूमा सजिलैसँग काम गर्न सक्थे, अर्थात्, निवास वा कार्य अनुमति बिना। यद्यपि, जब डिसेम्बर 31१, २०२० मा युनाइटेड किंगडमले युरोपियन युनियन छोडे, परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। […]
घर मालिकको दायित्व
भाडा सम्झौताको विभिन्न पक्षहरू छन्। यसको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको घर मालिक र उसले भाडामा लिने दायित्वहरू हुन्। जग्गा मालिकको दायित्वको सम्बन्धमा सुरूवात भनेको "भाँडाको सम्झौताको आधारमा किराएदारले आशा गर्न सक्ने आनन्द" हो। सबै पछि, दायित्वहरू […]
भूतपूर्व रखवाली को योगदान को रूप मा एक पूर्व पति या पत्नी र बच्चाहरु लाई एक भत्ता हो। गुजारा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई मर्मत debणी पनि भनिएको छ। गुजारा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई अक्सर रखरखावको हकदार भनेर चिनिन्छ। गुनासो एक रकम हो जुन तपाईं […]
निर्देशकको रुचि को द्वन्द्व
कम्पनीका निर्देशकहरू सँधै कम्पनीको चासो अनुरूप निर्देशित हुनुपर्दछ। यदि निर्देशकहरूले आफ्नै व्यक्तिगत रुचिहरू समावेश गर्ने निर्णयहरू गर्नुपर्दछ भने के गर्ने? यस्तो रुचि के हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा निर्देशकले के गर्ने अपेक्षा गर्छ? जब त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ […]
२०२१ एक वर्ष हो जहाँ कानून र कानूनको क्षेत्रमा केही चीजहरू परिवर्तन हुनेछन्। ट्रान्सफर ट्याक्सको सन्दर्भमा पनि यो नै हो। नोभेम्बर १२, २०२० मा, प्रतिनिधि सभाले हस्तान्तरण करको समायोजनको लागि विधेयकलाई अनुमोदन गर्‍यो। यसको उद्देश्य […]
स्वामित्व भनेको सब भन्दा व्यापक अधिकार हो जुन व्यक्तिले राम्रोमा पाउन सक्दछ, सिभिल कोडका अनुसार। सबै भन्दा पहिले, यसको मतलब यो हो कि अरूले त्यो व्यक्तिको स्वामित्वको सम्मान गर्न आवश्यक छ। यस अधिकारको परिणामको रूपमा, यो मालिकमा निर्भर हुन्छ कि उसको मालिसके पछि के हुन्छ। को लागि […]
२०१२ मा, BV (निजी कम्पनी) कानून सरलीकृत गरिएको थियो र अधिक लचिलो बनाइएको थियो। BV कानूनको सरलीकरण र लचिलोपन सम्बन्धी कानूनको प्रवेशसँगै, शेयरधारकहरूलाई उनीहरूको आपसी सम्बन्धहरू नियमित गर्ने अवसर दिइयो, ताकि कम्पनीको संरचना अनुकूल गर्न थप कोठा सिर्जना गरियो […]
व्यापार गोप्य सुरक्षा: तपाइँले के जान्नुपर्दछ?
ट्रेड सिक्रेट्स ऐक्ट (डब्ल्यूबीबी) २०१ 2018 देखि नेदरल्याण्ड्समा लागू भएको छ। यो ऐनले अज्ञात ज्ञात-कसरी र व्यावसायिक जानकारीको संरक्षण सम्बन्धी नियमहरूको समन्वयमा यूरोपीयन निर्देशलाई कार्यान्वयन गर्दछ। युरोपेली निर्देशकको परिचयको उद्देश्य सबैमा नियम विखंडन रोक्नु हो […]
अभ्यासमा, अभिभावकले बढि विदेशमा सरोगेसी प्रोग्राम सुरु गर्न छनौट गर्दछन्। तिनीहरूसँग यसका बिभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जुन सबै डच कानून अन्तर्गत अभिभावकहरूको अनिश्चित स्थितिसँग सम्बन्धित छन्। यी छोटकरीमा तल छलफल गरिएका छन्। यस लेखमा हामी वर्णन गर्दछौं कि विदेशमा सम्भाव्यताहरूले गर्न सक्छन् […]
नेदरल्याण्ड्स मा Surrogacy
गर्भावस्था, दुर्भाग्यवश, बच्चा जन्माउने इच्छा भएका प्रत्येक अभिभावकको लागि पाठ्यक्रमको कुरा हुँदैन। अपननको सम्भावनाको अतिरिक्त, सरोगेसी एक अभिभावक अभिभावकको लागि विकल्प हुन सक्छ। यस समय, सरोगेसी नेदरल्याण्ड्समा कानून द्वारा विनियमित छैन, जसले कानूनी स्थिति बनाउँछ […]
जब बच्चा जन्मन्छ, बच्चाको आमा स्वचालित रूपमा बच्चामाथि अभिभावकीय अधिकार हुन्छ। त्यस अवस्थामा आमा आफै पनि अझै नाबालिग नै रहेको अवस्थामा बाहेक। यदि आमाले आफ्नो पार्टनरसँग विवाह गरेको छ वा बच्चाको जन्मको बेलामा दर्ता गरिएको साझेदारी छ, […]
पार्टनरशिपको आधुनिकीकरणमा बिल
आजसम्म, नेदरल्याण्ड्सको साझेदारीका तीन कानुनी रूपहरू छन्: साझेदारी, सामान्य साझेदारी (VOF) र सीमित साझेदारी (CV)। तिनीहरू मुख्यतया साना र मध्यम आकारका उद्यमहरू (एसएमई), कृषि क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छन्। साझेदारीका सबै तीन प्रकारहरू एक नियमन डेटि onमा आधारित छन् […]
एक रोजगारदाताको रूपमा, के तपाईं बिरामी आफ्नो कर्मचारीलाई रिपोर्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ?
यो नियमित रूपमा हुन्छ कि रोजगारदाताहरूले उनीहरूको बिरामी रिपोर्ट गर्दा आफ्ना कर्मचारीहरू बारे शंका गर्छन्। उदाहरण को लागी, किनभने कर्मचारी प्रायः सोमबार वा शुक्रवार शुक्रवार बिरामी रिपोर्ट छ वा किनभने त्यहाँ एक औद्योगिक विवाद छ। के तपाइँलाई तपाइँको कर्मचारीको बिरामी रिपोर्ट प्रश्न गर्न को लागी अनुमति छ र यो स्थापित नभएसम्म मजदूरी को भुक्तानी निलम्बन […]
सम्बन्ध विच्छेद एक धेरै समावेश छ सम्बन्ध विच्छेद कार्य को चरणहरु को एक धेरै शामिल। कुन कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईको बच्चा छ वा छैन र तपाई भविष्यको भूतपूर्व पार्टनरसँग सम्झौतामा अग्रिम रूपमा सहमत हुनुभएको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, निम्न मानक प्रक्रिया पछ्याउनु पर्छ। पहिलो […]
यदि तपाइँका निर्देशहरू तपाइँको कर्मचारीले अनुसरण गरेनन भने यो धेरै कष्टकर हुन्छ। उदाहरण को लागी, एक कर्मचारी जसमा तपाई गणना हुन सक्नुहुन्न सप्ताहन्तको वरिपरि कार्य फ्लोरमा देखा पर्न सक्छन् वा जसले तपाईलाई सफा पोशाक कोड लागु हुँदैन भन्ने सोच्दछ उसलाई वा उनीलाई लागु हुँदैन। […]
गुनासो के हो? नेदरल्याण्ड्समा गुनासो एक पछि सम्बन्ध विच्छेद पछि आफ्नो पूर्व पार्टनर र बच्चाहरूको बाँच्न लागत को लागी एक आर्थिक योगदान हो। यो एक रकम हो जुन तपाइँले प्राप्त गर्नुहुन्छ वा मासिक तिर्नु पर्छ। यदि तपाईंसँग बाँच्नको लागि पर्याप्त आय छैन भने, तपाईं भत्ता पाउन सक्नुहुनेछ। […]
यदि तपाईंको कम्पनी भित्र विवाद उत्पन्न भएको छ जुन आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न सकिदैन भने, इन्टरप्राइज चेम्बर अघि एउटा प्रक्रिया तिनीहरूलाई सुल्झाउने उचित माध्यम हुन सक्छ। यस्तो प्रक्रिया एक सर्वेक्षण प्रक्रिया भनिन्छ। यस प्रक्रियामा, इन्टरप्राइज चेम्बरलाई नीति र मामिलाहरूको कोर्स अनुसन्धान गर्न भनिएको छ […]
एक प्रोबेशनरी अवधिको अवधिमा, रोजगारदाता र कर्मचारीहरूले एक अर्कालाई चिन्न सक्छन्। कर्मचारीले देख्न सक्दछन् कि काम र कम्पनी उसको रुचिमा छ, जबकि रोजगारदाताले देख्न सक्छन् कि कर्मचारी कामका लागि उपयुक्त छ कि छैन। दुर्भाग्यवस, यसले कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्दछ। […]
टर्मिनेसन र सूचना अवधि
के तपाईं सम्झौताबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ? यो सधैं सम्भव हुँदैन। अवश्य पनि, यो लिखित सम्झौता छ कि छैन र सम्झौताहरू सूचना अवधिको बारेमा गरिएको छ कि छैन यो महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाँही वैधानिक सूचना अवधि सम्झौतामा लागु हुन्छ, जबकि तपाईं आफैंमा […]
यो उस्तै राष्ट्रिय वा उही मूलका कसैसँग विवाह गर्ने चलन थियो। आजकल, बिभिन्न देशहरुका मानिसहरु बीचको विवाह बढी सामान्य भइरहेको छ। दुर्भाग्यवस, नेदरल्याण्डमा of०% विवाह विच्छेदमा अन्त हुन्छ। यो काम कसरी गर्दछ यदि एक व्यक्ति बाहेक अर्को देशमा बस्छ […]
सम्बन्ध विच्छेद को मामला मा आमा बुबा योजना
यदि तपाईं नाबालिग बच्चाहरू हुनुहुन्छ र तपाईं सम्बन्धविच्छेद हुन्छन्, सम्झौता बच्चाहरु को बारे मा हुनु पर्छ। आपसी सम्झौताहरू लिखित रूपमा सम्झौतामा राखिनेछ। यो सम्झौता प्यारेन्टिंग योजनाको रूपमा परिचित छ। प्यारेन्टिंग योजना राम्रो सम्बन्धविच्छेद प्राप्त गर्नका लागि उत्कृष्ट आधार हो। एक हो […]
झगडा सम्बन्धविच्छेद एउटा अप्रिय घटना हो जसमा धेरै भावनाहरू समावेश हुन्छन्। यस अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण छ कि धेरै चीजहरू सही तरिकाले व्यवस्थित गरिएको छ त्यसैले सही सहयोगमा कल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। दुर्भाग्यवस, प्राय: अभ्यासमा यो हुन्छ कि भविष्यका भूतपूर्व साझेदारहरू असक्षम छन् […]
आपराधिक रेकर्ड के हो?
के तपाईंले कोरोना नियम तोड्नुभयो र जरिवाना लिनुभयो? त्यसोभए, भर्खरै सम्म तपाई अपराधिक रेकर्ड राख्ने जोखिममा भाग्नुभयो। कोरोना जरिवाना अवस्थित छ, तर त्यहाँ आपराधिक रेकर्डमा कुनै टिप्पणी छैन। किन आपराधिक रेकर्डहरू छेउमा यस्तो काँढा भएको छ […]
डिसमिसल रोजगार कानूनमा सबैभन्दा टाढाको उपायहरू मध्ये एक हो जुन कर्मचारीका लागि दूरगामी परिणामहरू हुन्। किन तपाईं एक नियोक्ता रूपमा, कर्मचारी विपरीत, बस यसलाई कल गर्न सक्नुहुन्न। के तपाइँ तपाइँको कर्मचारी हटाउन को लागी इच्छा गर्नुहुन्छ? त्यो अवस्थामा, तपाईंले दिमागमा केही सर्तहरू राख्नु पर्दछ […]
क्षतिको दाबी: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ?
आधारभूत सिद्धान्त डच क्षतिपूर्ति कानूनमा लागू हुन्छ: सबैले आफ्नै क्षति भोग्दछन्। केही केसहरूमा, केवल कोही पनि जिम्मेवार हुँदैन। उदाहरणका लागि असिनाको परिणामको रूपमा हुने क्षतिको सोच्नुहोस्। के तपाईको क्षति कसैको कारणले भएको हो? त्यो अवस्थामा, यो क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न मात्र सम्भव छ यदि […]
परिवार पुनर्मिलनको सन्दर्भमा सर्तहरू
जब एक आप्रवासीले निवास अनुमति प्राप्त गर्दछन्, उसलाई वा उनलाई पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार पनि प्रदान गरिन्छ। पारिवारिक पुनर्मिलनको अर्थ स्थिति धारकका परिवारका सदस्यहरूलाई नेदरल्याण्डमा आउन अनुमति छ। मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली सम्मेलनको धारा ले यस अधिकारको लागि प्रदान गर्दछ […]
केहि परिस्थितिहरूमा रोजगार सम्झौताको अन्त्य, वा राजीनामा चाहिन्छ। यो केस हुन सक्छ यदि दुबै पक्षले राजीनामाको परिकल्पना गरे र यस सम्बन्धमा टर्मिनेशन सम्झौता गरे। तपाईं हाम्रो साइटमा पारस्परिक सहमति र समाप्ति सम्झौता मार्फत समाप्तिको बारेमा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ: Dismissal.site। थप रूपमा, […]
कार्य शर्त ऐन अनुसार रोजगारदाता र कर्मचारीको दायित्व
तपाईं जे काम गर्नुहुन्छ, नेदरल्याण्ड्समा आधारभूत सिद्धान्त भनेको यो हो कि सबैजना सुरक्षित र स्वास्थ्यिक रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यस आधार पछि दृश्य यो छ कि काम शारीरिक वा मानसिक रोग लिन र परिणाम मा मृत्यु मा सबै मा हुँदैन। यो सिद्धान्त हो […]
एक torणी जो अब आफ्नो बकाया debtsण तिर्न सक्षम छैन केहि विकल्पहरू छन्। उसले आफ्नै बैंकरप्सीको लागि फाइल गर्न सक्छ वा वैधानिक debtण पुनर्गठन व्यवस्थामा प्रवेशको लागि आवेदन दिन सक्छ। लेनदारले उसको torणीको दिवालियापनको लागि पनि आवेदन दिन सक्छ। Debणी हुनु अघि […]
२०१ of को एक प्रख्यात मुद्दा : मेक्सिकन नियामक निकाय सीआरटी (Consejo Regulador de Tequila) ले हेनेकेन विरूद्ध मुद्दा चलाएको थियो जसमा यसको डेस्पेराडोस बोतलहरूमा टकिला भन्ने शव्द उल्लेख गरिएको थियो। डेस्पेराडोस अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको हेनेकेनको चयन समूहसँग सम्बन्धित छ र ब्रेभरका अनुसार एक "टकीला फ्लेवर्ड बियर" हो। डेस्पेरोडोस […]
दुबै कर्मचारी र रोजगारदाता विभिन्न तरीकाले बर्खास्तको साथ सम्पर्कमा आउन सक्छन्। तपाईं आफैले यो छनौट गर्नुभयो वा छैन? र कुन परिस्थितिमा? सब भन्दा कठोर तरिकाहरू मध्ये एक तत्काल खारेज हो। त्यो के हो? त्यसो भए कर्मचारी र रोजगारदाता बीच रोजगार सम्झौता तुरुन्तै समाप्त हुन्छ। […]
पुरानो पोष्टहरू →